Ampidino PhotoScape ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (20.05 MB)
PhotoScape dia programa fanovana sary maimaimpoana ho anny Windows 7 sy solosaina avo kokoa. Izy io dia mpamoaka sary maimaimpoana izay ahafahanao manatanteraka mora foana ny karazana sary sy sary aminny fanovana sary aminny solosainao. Ny programa, izay azo ampiasainny mpampiasa solosaina aminny ambaratonga rehetra, dia manolotra ireo fiasa izay omenny programa fanovana sary maro eny an-tsena maimaimpoana. Photoscape X ho anny Windows 10 dia atolotra.
PhotoScape, izay misy ihany koa ny fanohanana aminny fiteny Tiorka, dia mamela ny mpampiasa Tiorka hahatakatra mora foana ny karazanasa rehetra ary hanatanteraka haingana ny hetsika fanovana sary tadiavinizy ireo.
Ahoana ny fametrahana PhotoScape?
Azonao atao ny manao asa maro toy ny fanapahana sary sy sary, manova ny habeny, fametrahana ny hamafiny, ny vokany sy ny sivana, ny safidy jiro, ny tsy fitoviana, ny famirapiratana ary ny fandanjana ny fandanjalanjana loko, ny fihodinana, ny refy ary ny fizarana fizarana, manampy sy manitsy sary miaraka aminny fanampianny PhotoScape;
Fomba fiasa PhotoSpace
Fanatsarana ny sary PhotoScape
Fambolena sary PhotoScape
Fanovana sary PhotoScape
Manova ny sary miovaova ny sary PhotoScape
Fanesorana ny background PhotoScape
Misarika ny saina ihany koa izy ho fandaharana tena mahomby aminireo taranja ao. Anisanireo mampiavaka ny PhotoScape;
Mpijery: Mijery sary ao aminny fampirimanao, manaova sary mihetsika.
Tonian-dahatsoratra: manova ny habe, ny famirapiratana ary ny fanitsiana loko, ny fifandanjana fotsy, ny fanitsian-jiro, ny zana-kazo, ny balaonina, ny fomba mozika, manampy lahatsoratra, ny sary, ny vokatra, ny sivana, manamboatra ny maso mena, ny mamirapiratra, ny borosy aminny loko, ny tombo-kase tombo-kase
Tonian-dahatsoratra: Manova sary marobe aminny andiany.
Pejy: Mamorona ny sary farany aminny alàlanny fampifangaroana sary marobe ao aminny takelaka pejy.
Manambatra: Mamorona ny sary farany aminny fanampiana sary marindrano na marindrano.
Animated GIF: Mamorona sary farany aminny fampiasana sary maro.
Manonta: Manonta sary fakana sary, karatra fandraharahana, sary pasipaoro.
Mpisaraka: zarao ho maro ny sary.
Screen recorder: sambory ary tahirizo ny pikasinao.
Mpaka loko: zahao ny sary, karohy ary safidio ny loko.
Omeo anarana: ovao ny sary fisie sary aminny maody batch.
RAW Converter: Manova endrika RAW ho endrika JPG.
Mahazo pirinty taratasy: Pirinty vita aminny tsipika, sary, mozika ary taratasy kalandrie.
Fikarohana tarehy: Mitadiava endrika mitovy aminny Internet.
Ahoana ny fampiasana PhotoScape
Misy safidy maro samihafa azonao ampiasaina aminny efijery lehibe miseho rehefa mihazakazaka voalohany ianao PhotoScape aorianny fisintomanao azy aminny solosainao. RAW Converter, Screen Capture, Color Collector, AniGif, Merge, Batch Editor, Editor and Viewer dia vitsivitsy monja aminireo safidy ireo. Aorianny fipihana ny rohy aminilay safidy tianao hampiasaina dia afaka manomboka haingana ianao aminny fampiasana ny bokotra rehetra ahafahanao manao ireo fikirana tianao.
Ny zavatra tianao hatao aminny PhotoScape, izay manana endrika maro aminny programa fanovana sary matihanina ary manolotra azy ireo maimaim-poana, dia voafetra ihany aminny sainao. Raha tianao dia afaka manao collage miaraka aminny sarinao ianao, afaka manampy sivana aminny sarinao, na afaka manomana gif animations ianao.
Ny zava-misy fa ny fitaovana fanovana sary sy sary rehetra mety ilainao dia miorina aminny sehatrasa tokana sy tsotra mahatonga ny PhotoScape ho manintona kokoa ny mpampiasa. Izany no antony raha mila programa fanovana sary maimaimpoana sy mora ampiasaina ianao dia tokony hanandrana ny PhotoScape tokoa.
Manamora ny fampiasana azy aminny alàlanny fanovana mandeha ho azy.
Manolotra fanohanana aminny fiteny Tiorka izy io.
Malalaka sy maimaim-poana.
Mila fampiharana ny fampiasana fitaovana mahomby.
Haben'ny rakitra: 20.05 MB
FastPictureViewer dia mpijery sary kely nefa haingana izay afaka mihazakazaka eo ambaninny rafitra...